Nri ụtọ nduku, anyị na-agwa gị otu ị ga-esi felata na nri a | Nutri Nri
Ancaro | | Nkwere maka enyemaka, Ahụike
Nke a bụ nri emere maka ndị chọrọ ịme nri ka ha ghara ibu ibu n'ihi na ha buru oke ibu ma bụrụ ndị na-anụ ụtọ poteto dị ụtọ. Nwere ike ime ya karịa izu 1, ọ ga-enye gị ohere idalata n'ihe dịka kilogram abụọ. Ugbu a, ị ga-enwerịrị ahụike ahụike iji tinye ya n'ọrụ.
Ọ bụrụ na i kpebisiri ike ime atụmatụ a, ị ga-a litersụ lita mmiri abụọ kwa ụbọchị n'agbanyeghị ihe ị na-eri na nri, mee ka nri gị na-atọ ụtọ na ihe na-atọ ụtọ ma jiri nnu na obere mmanụ sunflower rie nri gị. Nwere ike esi nri poteto na oven ma ọ bụ sie ya.
1 Nchịkọta ụbọchị
2 Kedu ihe kpatara ụtọ nduku ji dị mma maka ụkọ ibu?
3 Nri nduku
4 Ego ole ka kilogram furu efu na nri nduku?
5 Nri menu nri nduku
6 Nwere ike dochie nduku ụtọ maka ụtọ nduku?
Nri ụtụtụ: 1 ntinye ị họọrọ (kọfị ma ọ bụ tii) na otu iko mkpụrụ osisi citrus ị họọrọ.
Etiti ụtụtụ: ntinye nke 1 ị họọrọ (kọfị ma ọ bụ tii) na biscuits bran 2.
Nri ehihie: 1 iko nke efere ọkụ, ọnụego ịchọrọ poteto na mkpụrụ 1 ị họọrọ.
Etiti-ehihie: ntinye nke 1 ị họọrọ (kọfị ma ọ bụ tii) na kuki ọka niile 2.
Nri: 1 infusion nke masịrị gị (kọfị ma ọ bụ tii) na yogọt 1-abụba dị ala.
Nri Anyasị: 1 iko nke ìhè efere, ego ole ị chọrọ nke ụtọ nduku na 1 mkpụrụ ị họọrọ.
N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ menu nri nduku na-atọ ụtọ maka izu niile.
Kedu ihe kpatara ụtọ nduku ji dị mma maka ụkọ ibu?
Eziokwu bụ na nduku dị mma maka ọnwụ ọnwụ na karia ihe nile, ida ida. Otu n'ime ebe ndị kachasị emetụta anyị na nke anaghị adị mfe mgbe niile. Ọfọn, nduku na-atọ ụtọ ga-abụ ezigbo enyi ebe ọ nwere akara eriri dị elu. Nke a na-eme ka afọ ju anyị site na iwere obere nke ya. Ntughari ga-eji nwayọ nwayọ, yabụ mmetụta nke ịbụ nke afọ juru, anyị ga-achọpụta ya na oge.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ isi iyi zuru oke nke antioxidants yana obere glycemic index. Eziokwu bu na ezi nduku a ndeksi dị ala karịa nduku. Yabụ na ọ bụ ezigbo enyi mgbe niile. Mgbe ole anyị chọrọ ifelataAnyi choro ka ogo shuga di na obara kwesiri idozi ya, dika nduku oma ga-eme nke a maka anyi. Ma, ọ bụkwa nri nwere obere kalori nke nwere nnukwu mmiri, nke na-eme ka mgbaze ka mma.
N'ihi oke ọdịnaya nke carotenes, na ike antioxidant, ọ na-eme anyị otu n'ime nri dị mkpa maka nri anyị. Dị ka anyị maara nke ọma, ụtọ poteto nwere ọmarịcha eke protein. Mana ọ bụkwa na ọ nwekwara oke pasent nke eriri, n'otu oge ahụ nke ọ mejupụtara mineral dị ka calcium, magnesium, ma ọ bụ potassium, na-echefughi vitamin C. Maka gram nduku ọ bụla nke gram 100, ọ na-ahapụ ahụ ihe dịka 30 ml nke vitamin a na kwa nke vitamin E. Ma ọ na-enyekwa 480 mg nke potassium, iron 0,9 mg, gram 3 nke obere na obere karịa calorie 90.
Anyị enweghị ike ichefu, ebe ọ bụ na anyị ekwuola vitamin, nke nwekwara B1, B2, B5 na B6.
Ego ole ka kilogram furu efu na nri nduku?
Eziokwu bụ na ọ bụ obere nri. E kwesịghị ịgbatị ya n'oge, n'ihi na dịka anyị maara nke ọma, ị ga na-eri nri oge niile. O zuru oke maka ifelata n'otu oge dịka afọ. Ị nwere ike mee ya ihe dị ka ụbọchị ise ma ọ bụ isii ọ kachasị. Ọ bụrụhaala na ahụike gị dị mma. N'oge ahụ ị nwere ike ida kilo abụọ. Mana ọ bụ eziokwu na ahụ ọ bụla dị iche kpamkpam na a ga-enwe ndị nwere ike ịnwe ndapụta pụtara ìhè karị.
Nri menu nri nduku
Nri ụtụtụ: Otu iko ihe ọ juiceụ juiceụ na-atọ ụtọ na nduku oroma abụọ
Etiti ụtụtụ: gram iri atọ nke achịcha ọka wit na yogot ejiri skimmed
Nri ehihie: Nri nduku (ego ị chọrọ) ya na nnukwu efere nke letus na tomato
Etiti ehihie: Infusion na kuki ọka abụọ
Nri abalị: butere ụtọ nduku na ìhè akwukwo nri ude na mkpụrụ maka eji megharịa ọnụ.
Nri ụtụtụ: Otu iko ihe ọ juiceụ juiceụ mmiri nduku na-atọ ụtọ, àkwá siri ike, na mkpụrụ osisi
Etiti ụtụtụ: gram iri atọ nke achịcha ọka wit niile na gram iri ise nke chiiz
Nri: ụtọ nduku puree agwakọtara na tablespoon nke mmiri ara ehi skim na gram 100 nke anụ ọkụkọ eghere eghe na akwụkwọ nri
N'etiti ehihie. Infusion na 30 grams dum grains na skimmed yogọt
Nri Anyasị: Nri ụtọ nduku na salad na mkpụrụ osisi
Nri ụtụtụ: naanị kọfị ma ọ bụ mmiri ara ehi skimmed, gram 30 nke achịcha ọka wit niile na mpekere atọ nke toki ma ọ bụ ara ọkụkọ
Etiti ụtụtụ: gram 50 nke chiiz ọkụ na mkpụrụ osisi abụọ
Nri: Mkpụrụ nduku na-atọ ụtọ ma ọ bụ microwaved na 125 grams nke azụ na nnukwu efere nke salad.
N'etiti ehihie: juicetọ ihe ọ juiceụ juiceụ nduku na yogọt skimmed
Nri Anyasị: Ezi nduku puree na efere nke ọkụ ọkụ na mkpụrụ maka eji megharịa ọnụ.
Nri ụtụtụ: ụtọ nduku infusion ma ọ bụ ihe ọ juiceụ juiceụ na 5 Mpekere nke toki ma ọ bụ ọkụkọ na otu nke mkpụrụ osisi
Etiti ụtụtụ: gram iri atọ nke ọka buru ibu na mmiri ara skimmed
Nri ehihie: Nri ụtọ nduku na salad
N'etiti ehihie: gram 30 nke achịcha ọka wit niile na 0% cheese
Nri abalị: Ezi nduku puree, gram 150 nke azụ na yogọt nkịtị.
Nri ụtụtụ: Infusion na kuki abụọ dum
Etiti ụtụtụ: mkpụrụ osisi abụọ
Nri: Nri nduku esi nri ya na akwa abụọ esiri ya na otu nkpuru
Etiti ehihie: gram iri atọ nke achịcha ọka wit na toki
Nri abalị: Salad, ụtọ nduku puree na eke yogọt
Nwere ike dochie nduku ụtọ maka ụtọ nduku?
N’agbanyeghi na ajuju bu otu ihe a na-achota, eziokwu bu na aziza ya di nfe karie ihe anyi chere. Dị ka nduku uto na nduku uto bu otu. Nke ahụ bụ, aha abụọ maka otu tuber. Mana ọ bụ eziokwu na n’ebe ọ bụla, otu n’ime ha nwere ike ịmata ya, nke na-edugakarị na mgbagwoju anya. A ghaghi ikwu na nduku na-atọ ụtọ ma ọ bụ nduku na-atọ ụtọ mara aha poteto ma ọ bụ poteto dị ụtọ.
Eziokwu bụ na n'agbanyeghị na ọ bụ otu nri ka anyị na-eri mgbe niile, anyị na-eme ndịiche dị na ya. Ebe ọ bụ na ọ nwere ọtụtụ iche na nke a emeela aha ịpụta ya dịkwa iche. Otu n'ime ndị iche ga-abụ na agba ma pulp na akpụkpọ ahụ. Ebe ọ bụ na ụdị dị iche iche nwere uhie uhie bụ ihe anyị na-akpọ poteto ụtọ, ebe ndị nwere anụ ọkụ na-akpọ poteto ụtọ. Yabụ, mgbe anyị chọrọ ikwu maka ite nduku ma ọ bụ ite dị ụtọ na nri anyị, anyị kwesịrị ịmara na anyị ga-arịgo otu agwa ọma, akparamagwa na uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nkwere maka enyemaka » Nri nduku na-atọ ụtọ
ọ bụrụ na m ga-a ligụ mmiri ara ehi, 4 tost na iko kọfị abụọ kwa ụbọchị, n'eziokwu m ga-anwụ n'ihi agụụ na ọ bụ ya mere na enweghị m ike ịme nri iji felata.
Zaghachi ka eugenio
O na-ato m ochi ndia nri ndi i tinyere ifelata nke i na-eduhie ndi mmadu. Do naghị etinye protein na hydrate ị na-etinye na ị na-etinye ya na nri abalị nke ahụ bụ mgbe ị na-ama abụba ... ọ bụghị ikwu obere nri ị na-eri ... naanị ihe ị ga-enweta na nke a Nri bụ idafu mmiri mmiri site na infusions, ida ahụ ike site na obere protein ma tinye abụba site n'itinye hydrate na nri abalị mgbe ị ga-anọ na nri ụtụtụ iji nwee ike ụbọchị ahụ. O kwuola na onye ọ bụla bụ onye na-eri nri, ma n'ihi nke a, ha na-ebibi ahụ anyị na ahụike anyị
Ọfọn. Echeghị m na agaghị m eri anụ ọ bụla ruo otu izu mana onye ọbụ abụ mere nri a ma ọfụma
Zaghachi Inna Salazar
Fabio Calderon dijo
Ebee ka hel bu protein na nri a? O bu eziokwu na poteto uto bara ezigbo uru ma i ghaghi ijikota ha na protein, ka nchekpo ghara ime gi onye nzuzu ma ichoro iri enyí dum ... nke na-adabereghi na protein abaghị uru ... Ma ka iwelie akwara ma belata abụba ahụ
Zaghachi Fabio Calderon
Light nri abalị echiche na-enwe n'oge okpomọkụ a